सिंहदरबारमा गार्गी, फेसबुकमा याज्ञवल्क्य
- राेहेज खतिवडा
गार्गीः एक बिम्ब, यो समाजका लागि । याज्ञवल्क्य- गार्गी संवाद: एक प्रतिनिधि घटना ।
त्रेतायुगकाे कुरा हो, मिथिलाका राजा जनक थिए । धर्म र दर्शनमा उनको असाध्यै रुचि थियो । दर्शनका ज्ञाता ब्राम्हणहरूलाई उनको दरबारमा खुबै मान गरिन्थ्यो । उनको दरबारमा मान पाउने थुप्रै विद्वान्‌मध्ये एक थिए- याज्ञवल्क्य । याज्ञवल्क्य वेद, कानुन र दर्शनका ज्ञाता थिए । यी विषयमा मान्छेलाई मन्त्रमुग्ध बनाएर धाराप्रवाह प्रवचन दिन सक्थे । जनक बेलाबेला दरबारमा शास्त्रार्थ आयोजना गरिरहन्थे । शास्त्रार्थमा विजयी हुने विद्वान्‌लाई सयौँ गाई तथा सम्पत्ति दान गर्थे ।
एक दिन यस्तै शास्त्रार्थका लागि याज्ञवल्क्यसहित देश–देशका ब्राम्हण मिथिलानगरीमा भेला भएका थिए । त्यहाँ गार्गी पनि थिइन् ।
गार्गी थिइन् विदुषी । उनको दिमाग प्रश्नले घुमाउँथ्यो, जिज्ञासाले चलाउँथ्यो । उनी वेद, जीवन, जगत्, सृष्टि, ईश्वरबारे प्रशस्त ज्ञान राख्थिन् । आर्यवर्तमा उनको मान थियो, मिथिलामा नाम थियो । सभामा उनी पनि थिइन् ।
गार्गी उठिन् । सबैका आँखा गार्गीमा केन्द्रित भए । सभामा तरङ्ग सिर्जना भयो । उनको मुखबाट मृदु आवाज निस्किन थाल्यो । सभामा उपस्थित सबैको ध्यान उनको आवाजमा केन्द्रित भयो । नम्र स्वरमा उनले राजा र ब्राम्हणहरूलाई सम्बोधन गरिन् । र, याज्ञावल्क्यको उचित प्रशंसा गरिसकेपछि उनले सोधिन्, ‘यहाँसँग म एउटा प्रश्न राख्न सक्छु ?’
याज्ञवल्क्यले भने, ‘भन गार्गी, के जिज्ञासा लिएर आयौ ?’
गार्गीले आफ्नो प्रश्न राखिन्, 'भनिन्छ, पानीमा सबै कुरा घुल्न सक्छ । अन्तिममा यो पानी केमा परिणत हुन्छ ?'
याज्ञवल्क्यलाई आफ्नो विद्वतामा घमण्ड थियो । याज्ञवल्क्यजस्ता विद्वान् दार्शनिकलाई यस्तो झिनो प्रश्न गर्ने ? उनको क्रोध उम्लियो । उनी केही बेर मौन बसे । आफ्नै क्रोधलाई सम्हाले । अनि भने, 'पानी हावामा परिणत हुन्छ गार्गी ।'
ओ याज्ञवल्क्य ! हेर त सिंहदरबारको पर्खालवरिपरि । हेर त महिलाहरूको जुलुस । केही जब्बर गार्गीहरू तिम्रो आक्रोशसँग डराउँदैनन्, र निरन्तर प्रश्न गरिरहन्छन् । ओ याज्ञवल्क्य, आऊ एकफेर ती जब्बर गार्गीलाई सलाम गर ।
गार्गीले फेरि सोधिन्, 'हावा वायुमण्डलमा रहन्छ । वायुमण्डलबाहिर के छ ?'
याज्ञवल्क्यले संयमता अपनाए, 'वायुमण्डलबाहिर अन्तरिक्ष छ ।'
'अन्तरिक्षपछि के छ ?', गार्गी सोध्दै गइन्, याज्ञवल्क्य जवाफ दिँदै गए ।
लामो संवादपछि उनीहरू ब्रह्मलोकमा पुगेका थिए । गार्गीले सोधिन् : ब्रह्मलोकपछि के आउँछ ?
याज्ञवल्क्य रिसाए । क्रोधित भएर गार्गीलाई हप्काए, 'गार्गी, माऽति प्राक्षिर्मा ते मूर्धा व्यापप्त्त् ।'
अर्थात्, यति धेरै प्रश्न नगर् गार्गी, कतै तेरो शिर भुइँमा नझरोस् !
अर्थात्, सभामा उपयुक्त हुने भाषा प्रयोग गरेर याज्ञवल्क्यले भन्ने गरेका थिए, 'चुप लाग् गार्गी !'
ओलीको असंवैधानिक कुविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको थियो । नागरिक आन्दोलनको सिंहदरबार मार्चमा सपना सञ्जीवनीले कविता सुनाइन् । भनिन्, 'अब हामी सीता बनेर अग्नि परीक्षा दिँदैनौँ । आधुनिक याज्ञवल्क्य उसैगरी क्रोधित भए । उनीहरू एकाएक सामाजिक सञ्जालमा उपस्थित भए, धम्कीका विविध भाषा लिएर । फेसबुकमा-ट्विटरमा उनीहरू भनिरहेका छन्, 'चुप लाग् गार्गी !'
२१औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि गार्गीका प्रश्नमा रोक लगाउने, आवाज थुन्न खोज्नेहरूलाई यो समाज र यो सत्ताले संरक्षण गरिबस्छ । यो सत्ताका नाइकेले नै कुनै दिन महिलाहरूलाई खुलमखुल्ला भनेका थिए, ‘ट्याउँट्याउँ नगर ।’ उनका लागि संविधानअनुसार महिलाले पाउनुपर्ने अधिकारका लागि उठेको आवाज फगत ट्याँट्याउँ हो । यो समाज, यो सत्ता बुझेकी कुन्ता शर्माले धेरै पहिले कवितामार्फत व्यङ्ग्य कसेकी थिइन्:
यो समय प्राचीन याज्ञावल्क्य-गार्गीको होइन । आजकल शास्त्रार्थ हुन्छ सामाजिक सञ्जालमा । सन् २००४ मा लक्का जवान जुकरवर्गले फेसबुक बनाए । सँगै आए ट्विटर, इन्स्टा अनेक । आजकल याज्ञवल्क्यहरू आफ्नो भाले अहम् बोकेर सामाजिक सञ्जालमा पस्छन् । जब कहीँ गार्गीको मसिनो स्वर सुन्छन्, अनि उनीहरू कड्किन्छन्, 'चुप लाग गार्गी !'
गतवर्ष भारतको राष्ट्रवादी-हिन्द' अतिवादी-पुरुष सत्ताले काश्मिरले उपभोग गरिरहेको सीमित स्वायत्तता खोस्यो । नागरिक प्रतिरोध दबाउन फोन, इन्टरनेट सबै बन्द गर्‍यो । हर घरअगाडि बन्दुकधारी सैनिक उभिएका थिए । महिनौँदेखि निरन्तर कर्फ्यु थियो । कति प्रदर्शन भए, कति मानिस मारिए, घाइते भए, बलात्कृत भए, कुनै पनि तथ्यांक राज्यले दिएको छैन, सूचनाको अर्को स्रोत छैन ।
काश्मिरको स्वायत्तता खोसिनुअघि दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको पढाइ सकेर फर्किएकी थिइन् शहेला रसिद । नयाँ दल खोलेकी थिइन् उनले त्यहाँ । काश्मिरको स्वतन्त्रता खोस्दा उनी दिल्लीमै थिइन् । दिल्लीबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर काश्मिरको अवस्थाबारे बोलिरहिन् ।
विश्वले थाहा पाओस् भनेर शहेला अंग्रेजीमा ट्वीट लेख्छिन् । तब, मानिसहरूको एउटा झुण्ड सामाजिक सञ्जालमा आइपुग्छ, कति अनुहार देखाएरै आउँछन्, कति मुखुण्डो लाएर आउँछन् र शहेलालाई अश्लील गाली दिन्छन् । त्यो गालीको उत्कर्ष हुन्छ, बलात्कारको धम्की !
सिङ्गो ओलीसत्ता आफ्ना साइबरस्यालसहित झाँक्रीको अपमान गर्न लागिपर्‍यो । प्रधानमन्त्री स्वयम्‌ले स्ट्यान्ड अप कमेडियनलाई पनि नसुहाउने अभिनय गर्दै सार्वजनिक मञ्चबाट अपमान गर्न लागिपरे । यसअघि उनलाई पक्राउ गर्ने नाटकसमेत यो अवैधानिक सत्ताले रच्यो । तिनै झाँक्रीलाई कसैले फेसबुकबाट धम्की दियो, 'यी झाँक्रीलाई म बाटोमा भेटे बलात्कार गर्छु ।'
सामाजिक सञ्जालमा खुलमखुल्ला कसैले लेख्छ, 'तेरो यौनाङ्गबाट पाँच फिटको रड घुसाउनुपर्ने !' (लेख्न गाह्रो भएकाले शब्द फेरिएको)
अर्को लेख्छ, 'तँलाई दिनदहाडै चोकमा बलात्कार गर्नुपर्ने !'
यस्ता सयौँ प्रतिक्रिया, सामाजिक सञ्जालमा !
अर्थात्, 'चुप लाग् गार्गी !'
ओलीले असंवैधानिक कुमार्फत संसद् विघटन गरेपछि नेकपाकै अर्को गुट आन्दोलनमा लाग्यो । आन्दोलनमा सबैभन्दा टड्कारो सुनिने आवाज बनिन् युवानेता रामकुमारी झाँक्री । सिङ्गो ओलीसत्ता आफ्ना साइबरस्यालसहित झाँक्रीको अपमान गर्न लागिपर्‍यो । प्रधानमन्त्री स्वयम्‌ले स्ट्यान्ड अप कमेडियनलाई पनि नसुहाउने अभिनय गर्दै सार्वजनिक मञ्चबाट अपमान गर्न लागिपरे । यसअघि उनलाई पक्राउ गर्ने नाटकसमेत यो अवैधानिक सत्ताले रच्यो । तिनै झाँक्रीलाई कसैले फेसबुकबाट धम्की दियो, 'यी झाँक्रीलाई म बाटोमा भेटे बलात्कार गर्छु ।'
ओलीराजमा यस्तो धम्की दिनेलाई कुनै कारबाही हुन्न । किनकि ओलीराज चाहन्छ- महिलाहरू यसरी नबोलून् । झाँक्रीको हुँकारलाई ओलीराज ‘ट्याउँट्याउँ’ मात्रै सुन्छ ।
संविधानविपरीत ३३ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य नभएको पार्टी दर्ता गर्दा होस् वा नागरिकतासम्बन्धी विभेदकारी कानुन बनाउँदा, बलात्कारीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गर्दा होस् वा महिलाको मन्त्रीमण्डलमा महिलाको प्रतिनिधित्वको कुरा उठाउँदा होस्, सामाजिक सञ्जालमा थरीथरी याज्ञवल्क्य सक्रिय हुन्छन् र चिच्याउँछन्, 'चुप लाग् गार्गी !' प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अरूका कुरा सापटी लिएर महिला अधिकारका कुरा नगर्न सुझाव दिएको सगर्व सुनाउँछन् ।
भारतको उत्तरपूर्वी राज्य आसाममा लामो समयदेखि चर्चा भएको कानुन एनआरसी कार्यान्वयनमा आउने भयो । करिब २० लाख मानिस नागरिकको सूचीबाहिर परे । यो उनीहरू अनागरिक बन्ने अवस्था हो । एनआरसीमा भएको व्यवस्थाअनुसार यो सूचीमा नपर्ने मानिस अवैध आप्रवासी हुन् । सूचीमा नाम नपरेका कारण लगभग १ सय जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् ।
सबैभन्दा धेरै बंगालीभाषी मुसलमान समुदायका मानिसका नाम यो सूचीभन्दा बाहिर पर्‍यो । उनीहरू पछिल्लो १ सय वर्षभन्दा अघिदेखि पटकपटक गरी यो भूमिमा आइपुगेका हुन् । उनीहरूले ब्रह्मपुत्र नदीको बगरमा भीषण जंगल फाँडेर खेत बनाए, जमिन आवाद बनाए । बाटो बदल्न मन पराउने ब्रह्मपुत्रले यस्ता कैयौँ खेत खाइदियो तर उनीहरूले फेरि अर्को ठाउँमा खेती सुरु गरे । आसामलाई उनीहरूले धानको सुगन्ध दिए ।
आसामी राष्ट्रवादको आगो सल्कियो । जो कमजोर छ, पहिलो निशाना त्यहीँ दागिन्छ । गरिबी र अशिक्षाको चपेटामा चेप्टिएको, ब्रह्मपुत्रमा बर्सेनि आउने बाढीले बिजोग बनाएको मिया समुदायलाई आसामी राष्ट्रवादले तारो बनायो । ‘बंगलादेशी भगौडा’ को अपमानले पुगेन, उनीहरूलाई बंगलादेश फिर्ता गर्नुपर्ने नारा गुञ्जिन थाल्यो । यसले एनआरसी जन्मायो ।
मिया समुदायकी रेहना सुल्ताना गुवाहाटी विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गर्दै छिन् । विभेद, अपमान, बाढी, गरिबी सहेको उनको समुदायमाथि अर्को आपत् आइलाग्यो- एनआरसी । उनी स्वयंसेवकका रूपमा एनआरसीमा नाम कसरी दर्ता गर्ने, काजगपत्र कसरी तयार पार्ने, कसरी पेस गर्ने भनेर मानिसहरूलाई सिकाउँछिन् । सहयोग गर्छिन् ।
उनलाई आफूले देखेको यो दुःख, यो पीडा, यो अत्यास लेख्न मन लाग्यो । आफ्नो दुःख अर्काको भाषामा लेखिएन । उनीहरूको आफ्नो भाषा थियो, अक्षर थिएन । झण्डै २ सय वर्षको इतिहास बोकेको भाषामा आजसम्म कसैले केही लेखेकै थिएन । रेहना र अरू चार युवाले आसामी अक्षर सापटी लिए । र, आफ्नो भाषामा कविता लेखे । मिया भाषामा सर्वप्रथम केही लेखियो ।
भर्चुअल संसारमा जब कोही आलोचनात्मक चेत बोकेर छिर्छ, लिङ्गअनुसार उनीहरूलाई गर्ने गाली फरक पर्छ । महिलालाई गर्ने गाली उसको यौनाङ्गबाट सुरु हुन्छ र बलात्कारमा पुग्छ ।
अलजजिराले यो खबर थाहा पायो । यसबारे एउटा भिडियो रिपोर्ट बनायो । यो भिडियो प्रसारण भएपछि आसाममा उनीहरू चर्चाको विषय बने । एकाएक रेन्हाले कल्पना पनि नगरेका कुराहरू सामना गर्नुपर्‍यो ।
फेसबुकमा म्यासेज, ट्यागको वर्षा हुन थाल्यो । उनी आत्तिइन् । यति धेरै गाली यति मान्छेको ? उनले कल्पनासमेत गरेकी थिइनन् । मिया कविता लेखेर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा आसामको बेइज्जत गरेको आरोप उनीहरूमाथि लाग्यो । तर, रिस धेरै रेहनामाथि पोखियो किनभने उनी महिला थिइन्, उनी मात्रै महिला थिइन् । उनले फेसबुक हेर्न छोडिन् । फोन बज्दा तर्सिन थालिन् । यतिसम्म कि मोबाइल नै बोक्न छोडिन् । परिवारका कसैले सम्पर्क गर्नुपर्‍यो भने पनि उनका नजिकका साथीमार्फत कुरा गर्नुपर्थ्यो । उनलाई दिइने सबैभन्दा धेरै गाली बलात्कारकै धम्की थियो । त्यो अझै जारी छ ।
उनले पुलिसमा जाहेरी दिने सोचिन् । एक जना होइन, दुई जना होइन, दर्जनौँ बलात्कारका धम्की छन्, सयौँका अश्लील गाली छन् । कति जनाविरुद्ध उजुरी दिने ? यो सबै कारबाही प्रक्रियामा जानु आउनु, पुलिसको औपचारिकता पूरा गर्नु । उनले मन मारिन् । उजुरी उल्टै उनीविरुद्ध लाग्यो । (पुलिस उनको थिएन, घृणाको भाव जोसँग थियो, सरकार उसैको थियो, पुलिस उसैको थियो । हुन सक्छ, उनको अवचेतन मनले भन्यो, उजुरी दिएर केही हुन्न ।)
एउटा स्थानीय पत्रिकाले वर्षौं पुरानो ट्वीट उत्खनन गरेर छाप्यो, त्यो पनि गलत व्याख्या गरेर । क्रिकेटमा खेलाडीको प्रदर्शनको प्रशंसा गर्न प्रयोग गरिएको बिम्बको गलत अर्थ लगाएर धार्मिक सहिष्णुता भाँड्न खोजेको आरोप लगाइयो । योसँगै उनीविरुद्ध चारवटा एफआईआर दर्ता भए । उनी हिरासतमा समेत बसिन् । जसले उनलाई बलात्कारको धम्की दिएका थिए, जसले उनलाई अश्लील गाली गरेका थिए, तिनीहरू खुलमखुल्ला हिँडिरहेका छन् ।
अझै उनका बारेमा कतै केही सामग्री प्रकाशित भयो अथवा उनले कुनै स्टाटस लेखिन् भने अश्लील गाली र बलात्कारको धम्की सुरु हुन्छ । उनको यौनाङ्गको आकारप्रकारको कुरा हुन्छ । उनलाई कसरी बलात्कार गर्ने भन्ने म्यासेज आउँछ ।
लोकतान्त्रिक हुने अपेक्षा गरिएको सामाजिक सञ्जाल पितृसत्ताले सर्लक्कै अपहरण गर्‍यो । त्यहाँ याज्ञवल्क्यको सर्वव्यापी उपस्थिति छ । वर्तमान समाजको विसंगतिबारे कोही गार्गीले प्रश्न गरे ऊ औँलो ठड्याउँछ, ‘धेरै प्रश्न नगर गार्गी !’
सामाजिक सञ्जालमा कोही गार्गीले आफ्नो भावना पोखे, त्यहाँ ढोँगी नागाबाबाको जुलुस सुरु हुन्छ । त्यो जुलुसबाट उम्केर भाग्न ती महिलालाई हम्मेहम्मे पर्छ । यो तथाकथित् लोकतान्त्रिक स्पेसमा वर्चस्ववादीको भन्दा फरक विचार राख्ने पुरुषलाई त टिकिखान गाह्रो हुन्छ । हजारौँ तथानाम गालीको कालकुट पिएर नीलकण्ठ बन्नुपर्छ । पितृसत्ताको जञ्जिरले चौतर्फी बाँधिएकी तर नवीन चेतनाले त्यो जञ्जिर तोड्न लागिपरेकी महिलालाई यहाँ जुध्न कति गाह्रो छ भन्ने त्यो भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुने कुरा हो । उनीहरूले जे भोगिरहेका छन्, शायदै शब्दहरूमा व्यक्त होला ।
एक जब्बर भारतीय पत्रकार राना अय्युबलाई हेर्नुस् । केही महिनाअघि रानालाई न्यु योर्कर म्यागजिनमा डेक्सटर फिल्किन्सले प्रस्तुत गरे । फिल्किन्सले रानाको कथा भने र रानालाई मियो बनाएर वर्तमान भारतको कथा भने । विश्वका जिज्ञासु आँखाले रानालाई हेरे, भारतमा उनको चर्चा उत्कर्षमा पुग्यो । चर्चा/प्रशंसा मात्रै होइन, गाली पनि । आलोचना पनि यदाकदा भए । जस्तै, द प्रिन्ट नामक अलाइनमा अभिजित ऐयर–मित्र नामका एक व्यक्तिले उनलाई पश्चिमाले हुर्काउँदै गरेकी अर्की अरुन्धती रोयको उपमा दिए । काश्मिरका बारेमा, भारतका बारेमा, गुजरातका बारेमा रानाले जे भनिन्, त्यो पत्याउने कुनै आधार नरहेको जिकिर उनले गरे । अर्थात्, सरकारले जे भन्छ, त्यही पत्याउनुपर्छ भन्ने उनको आग्रह छ । यसलाई स्वस्थ आलोचना नै मानौँ । यस्तै, ओपएड इन नामको अनलाइनले रानाले विदेशी पत्रकारको तस्करी गरेर काश्मिर पुर्‍याएको समाचार लेख्यो । मानौँ, यो पनि आलोचना नै हो ।
न्युयोर्करको अनलाइनमा फिल्किन्सको लेख ‘ब्लड एन्ड सोयल इन नरेन्द्र मोदीज इन्डिया’ प्रकाशित भएपछि उनले आफ्नो ट्वीटरमा लिंक राखिन् । गालीको शृंखला त्यहाँ सुरु भयो । धेरैले उनलाई ‘फिक्सन राइटर’ भनेर खिल्ली उडाउने प्रयास गरे । वास्तवमा त्यो उनीहरूले आफैँलाई दिएको सान्त्वना थियो कि रानाले जे लेखिरहेकी छिन् त्यो सत्य नभइदिए हुन्थ्यो । अदालतले नै गुजरात दंगा र त्यसपछि भएका विभिन्न गैरन्यायिक हत्याकाबारेमा उनले लेखेको पुस्तक ‘गुजरात फाइल्स’लाई आख्यान करार गरिदिएको थियो ।
पवन भारद्वाज नामका व्यक्तिले उनलाई सल्लाह दिए, ‘कब्रो के आसपास मत जाया करो पगली, अभी आपकी उम्र ही क्या, आपको बहुत कुछ देखना है ।’ जजसले यो लेख आफ्नो ट्वीटर-फेसबुकमा शेयर गरे, पितृसत्ताका रक्षक गालीको बन्दुक बोकेर त्यहाँ हाजिर भए र कमेन्टमा फायर खोले ।
जब तहल्कामा उनले गुजरातको सन् २००२ को हिन्दु–मुस्लिम दंगा र फेक इन्काउन्टरको पर्दा खोलिन्, तत्कालीन प्रदेश गृहमन्त्री अमित शाह पक्राउ परे । यतिबेला उनको यौन भिडियो बनाएर सार्वजनिक गरिदिने धम्कीसमेत आयो । यसपछि ऐनमौकामा उनलाई यस्ता धम्की आइरहन्छन् । (उनको पुस्तक गुजरात फाइल्सलाई कन्नाडा भाषामा अनुवाद गर्ने पत्रकार गौरी लंकेशको हत्या भइसकेको छ । प्रश्न गरेकै कारण उनको हत्या भएको हाे ।)
लोकतान्त्रिक हुने अपेक्षा गरिएको सामाजिक सञ्जाल पितृसत्ताले सर्लक्कै अपहरण गर्‍यो । त्यहाँ याज्ञवल्क्यको सर्वव्यापी उपस्थिति छ । वर्तमान समाजको विसंगतिबारे कोही गार्गीले प्रश्न गरे ऊ औँलो ठड्याउँछ, ‘धेरै प्रश्न नगर् गार्गी !’
भर्चुअल संसारमा जब कोही आलोचनात्मक चेत बोकेर छिर्छ, लिङ्गअनुसार उनीहरूलाई गर्ने गाली फरक पर्छ । महिलालाई गर्ने गाली उसको यौनाङ्गबाट सुरु हुन्छ र बलात्कारमा पुग्छ । जसरी हाम्रो समाजका हरेक क्षेत्रमा, हरेक पेसामा, हरेक सार्वजनिक स्पेसमा, संवादमा, भाषामा, समाचारमा, विचारमा पितृसत्ताको नियन्त्रण चल्छ, सामाजिक सञ्जालमा पनि चल्छ । जसरी २१औँ शताब्दीमा पनि महिलाहरूले सुनसान बाटो हिँड्नुअघि सोच्नुपर्ने परिस्थिति छ, त्यसैगरी याज्ञवल्क्य चाहन्छन्, यो सामाजिक सञ्जाल पनि यो भर्चुअल संसारमा पनि उनीहरू दबिएरै बसून्, केही बोल्नुअघि सातपल्ट सोचून्, यो पितृसत्तामाथि प्रश्न नगरून् ।
याज्ञवल्क्य-सूत्रको शिक्षामा हुर्किएकालाई, मर्यादापुरुषोत्तमको अभिमान बोकेकालाई गाह्रो छ ।
गतसाल साग खेलकुदमा नेपाली खेलाडीले राम्रो खेले । पत्रिका र अनलाइनले सानदार हेडलाइन पाए । कुनै टिम गेममा पुरुष टोलीले अर्को देशको टोलीलाई हराउँथ्यो, तब शीर्षक बन्थ्यो, ‘नेपालले फलानो देशलाई हरायो ।’ महिला टोलीले हराउँदा शीर्षक बन्थ्यो, ‘नेपाली चेलीले फलानो देशलाई हराए !’ वा ‘नेपाली चेलीको चमत्कार !’ पुरुष खेलाडीले जित्दा देशले जितेको हुने, महिला खेलाडीले जित्दा चैँ चेलीले जितेको हुने ? महिलाहरूले प्रश्न गरे । ट्वीटरमा बहस चल्यो । उनीहरूले भने खेलाडीलाई खेलाडी भन, चेली, बेटी, बहिनी, डल्ली, प्याउली होइन, खेलाडी भन । अनि राष्ट्रियता, संस्कृति, परम्परा जोगाउन लागिपरेका केही पुरुष ट्वीटकर्ताहरू हाजिर भए र भने, 'तिमीहरू डलरवादी ! तिमीहरूले गर्दा हाम्रो राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति, पहिचान सबै एकाएक खतरामा पर्‍यो ।'
हामीले सोचनौँ कि यो थलो पनि वर्चस्वशाली वर्गले कब्जामा राख्नेछ र विरोधका स्वरहरू दबाउन हर हथकण्डा प्रयोग गर्नेछ । आज सिंगो दक्षिण एसियामा सामाजिक सञ्जाल एउटा अनौठो प्रयोगशाला बनेको छ, जसले सत्ताको विरुदावली गाउने र अल्पसंख्यक तथा कमजोर समुदायको आवाज दबाउने अनौठो प्रवृत्ति देखाएको छ । यहाँ महिलालाई अश्लील गाली, यौनाङ्ग जोडेर गाली दिने, बलात्कारको धम्की दिने एउटा अनौठो महामारी फैलिएको छ । भारतमा सामान्यजस्तै बनेको यो महामारी नेपालमा पनि उसैगरी फैलिन थालेको छ ।
जब एक जब्बर महिला दुनियाँले सुन्ने गरी बोल्न थाल्छिन्, सामाजिक सञ्जालमा हजार याज्ञवल्क्य हाजिर हुन्छन्, र एकस्वरमा कराउँछन्- चुप लाग् गार्गी !
त्यति बेला, याज्ञवल्क्यले गाली गरेपछि गार्गी अवाक् भइन् । उनको दिमाग घुम्यो । सोचिन् । आफूलाई सम्हालिन् । प्रश्न गर्ने कुनै उपयुक्त मौका किन नआउला भनेर मौन बसिन् ।
उनीहरूको संवाद समेटिएको बृहदारण्यक उपनिषद् भन्छ, 'ततो ह गार्गी वाचन्कव्युपरराम ।'
यो उपनिषद्‌का हिन्दी अनुवादक अर्थ लगाउँछन्, 'तब गार्गी वाचन्कवि चुप हो गई ।'
(याज्ञवल्क्य एक बिम्ब मात्रै हुन् । उनी विद्वान् महर्षि थिए । प्राचीन दक्षिण एसियाली दर्शनमा उनको योगदान महत्त्वपूर्ण छ । यहाँ प्रयोग गरिएको बिम्बले उनको कठोर पितृसत्तात्मक चेहरालाई मात्रै प्रस्तुत गरेको हो । उनको महानताबारे पढ्न सामग्रीको कुनै खाँचो छैन । स्वयम् बृहदारण्यक उपनिषद्ले उनको दार्शनिक अवतारको व्याख्या गर्छ । तपाईं गार्गीबारे पनि पढ्न चाहनुहुन्छ ? त्योचाहिँ याज्ञवल्क्यबारे पढ्नजस्तो सजिलो हुने छैन । तपाईंले गार्गीलाई धर्मशास्त्रमा अन्यत्र सायदै भेट्नुहुनेछ ।)
सपना सञ्जीवनी, रामकुमारी झाँक्री, ट्वीटरका ‘दोस्रो दर्जाका नागरिक’ । शहेला रसिद, रेहना सुल्तान, राना अय्युब । नयाँ युगका गार्गीहरू याज्ञवल्क्यलाई प्रश्न सोधिरहनेछन् । ओ याज्ञवल्क्य, हेर त गार्गीहरू सिंहदरबार मार्चमा गइरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फागुन १३, २०७७, १२:०८:००